Tambavy CVO Tsy nanao kaomandy izany ny CEDEAO
Ny Covid-organics, raha tsiahivina, dia vokatry ny fikaroahana nataon` ireo mpikaroka eo anivon` ny IMRA izay nanolotra tambavy ho fanafody fanefitra entina miady amin` ny coronavirus.
Noho izany, nizara izany tamin` ireo firenena afrikanina izany ny filoha Rajoelina. “Manoloana ny fangatahana nataon` ireo filoha afrikanina, dia voninahitra ho ahy no manolotra ireo fanomezana avy aty Madagasikara ho an` ireo firenena 15 mikambana eo anivon` ny CEDEAO” hoy izy tamin` ny naneho fisaorana ny Guinée- Bissau izay hiantoka ny fitsinjarana ny vokatra ao amin`ny faritra CEDEAO. Saingy namoaka fampitam-baovao ofisialy ny CEDEAO (vondron` ireo firenena any Afrika andrefana) ny alarobia lasa teo ka nandà mafy izany kaomandy CVO voalaza nataony izany. “Nisintona ny sainay ny filazana tamin` ireo haino amn-jery fa ny CEDEAO dia nanafatra ny tambavy Covid Organics (CVO) avy amina firenena iray. Tianay no manamarika fa ny CEDEAO sy ny rafitra manokana misahana ny fahasalamana (OOAS) ao aminy dia mitsipaka io filazana ary mampandre ny besinimaro fa tsy nikaomandy izany fanafody izany”. Na izany na tsy izany, notsindrian` ny CEDEAO hoe “ao anatin` ny fiantohana sy ny fanatsarana ny fahasalaman`ny mponina ao amin`ny faritra, manohana hatrany ny fampiroboroboana ny fitsaboana lovain-jafy sy ireo vokatra ao amin`ny faritra CEDEAO ny OOAS ary niara niasa an-taonany maro, raha toa ka manaraka ny fenitra siantifika ireo fanafody.” Araka ny fanambarana hatrany dia ny ivon-toerana afrikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina (CDC Afrique), rafitra eo anivon` ny Vondrona afrikanina no voalaza fa mifandray amin`i Madagasikara mba “hitsirika ny antontan-kevitra ara-tsantifika misy hatramin` izao ho fiantohana sy hanaporofo fa mahomby manoloana ny COVID-19”.